I-LED Light Manufacturer/Supplier kusukela ngo-2004 | Ukukhanyisa kwe-LEDIA
I-LEDIA ibihlinzeka ngemikhiqizo enenani eliphezulu kubalingani bethu abahlonishwayo emhlabeni jikelele.
I-Led Indoor Lighting
I-Vapor Tight Light
I-Led Outdoor Lighting
I-Led Khula Ukukhanya
Ukukhanyisa Kwe-Led Strip
I-Regular Strip Led
I-Silicone Strip Led
Amahhotela Nezitolo Zokuthenga
Imikhiqizo efakiwe noma izinto ezintsha
I-LEDIA ibihlinzeka ngemikhiqizo enenani eliphezulu kubalingani bethu abahlonishwayo emhlabeni jikelele,
zonke ziyi-DLC/UL/ETL/TUV/SAA/CE/ENEC zifanelekile.
Outdoor Lighting Izicelo
Ubudlelwano obuseduze bokusebenzisana namakhasimende buvumela ithimba lethu ukuthi lilethe isevisi ye-bespoke engeyona eyesibili.
Indoor Lighting Izicelo
Ithimba lethu labaklami abazinikele kanye nethimba lokukhiqiza liyakwazi ukuhlinzeka ngesixazululo sokwenza ngokwezifiso ukuze sivumelane.
Ukwakha Ukukhanyisa Izicelo
Isungulwe ngo-2004, i-LEDIA iyibhizinisi loMbuso eliphezulu lobuchwepheshe. Itholakala esifundeni sase-Huadu (eduze ne-Guangzhou Baiyun International Airport), futhi iyingxenye ye-Honglitronic Group. Ngemva kweminyaka yokuthuthuka, i-LEDIA eyasungula idumela elihle kokubili ezifuywayo naphesheya kwezilwandle, isibe yinkampani ehamba phambili embonini yokukhanyisa eqondile. Ngokusimama kwenkampani, amathalente kanye nokuqanjwa okusha kuyisihluthulelo kanti ikhwalithi iyimpilo.
I-LEDIA inezinga lesifundazwe lokuhlola izindawo zokucwaninga ze-CNAS, iqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo idlula ekuhlolweni okuhlobene ngaphambi kokuya emakethe. Imikhiqizo esiyikhiqizayo ehlanganisa ukukhanya kwebhodi elingenalutho le-LED, ukukhanya kwe-PVC/silicone strip, ukukhanya kwekhabhinethi nezinye izinto zokukhanyisa zonke ezitholwe isitifiketi sase-China CCC, isitifiketi se-US UL/ETL, i-EU CE, i-ROHS, i-TUV ne-Australia SAA, DLC, ukuqinisekiswa kwe-ENEC, ukuqinisekisa ukuthi amaklayenti ayethemba imikhiqizo yethu. Khanyisa umhlaba ngemikhiqizo yokukhanyisa ewumugqa yilokho i-LEDIA ekuphishekela ngaso sonke isikhathi.
Umbono-Iba yibhizinisi elivelele emkhakheni wokukhanyisa kwe-LED eChina.
Umsebenzi-Dala inani lokukhanyisa ngesayensi nobuchwepheshe, futhi uzame ukufeza amaphupho eqembu.
Inombolo Yamalungelo Obunikazi
I-LEDIA ibihlinzeka ngemikhiqizo yenani eliphezulu kubalingani bethu abahlonishwayo emhlabeni jikelele, okuhlanganisa ukukhanya kwe-LED Outdoor, ukukhanya kwe-LED Industrial, ukukhanya kwe-LED Commercial kanye nokukhanyisa kwe-LED Decorative.
Umuntu Othintwayo: Ilanga Lelanga
Ikheli: No.1 Xianke 1st Road, Huadong Town, Huadu Dist, Guangzhou, China